သငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌ထပ်ခါတလဲလဲကြောင်းထင်ပါသလား? သို့သော်ဤကိစ္စတွင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာတစျခုတစ်ခါသာသမိုင်း၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းဖြစ်ရပ်များများ၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျကိုမယုံ, သူတို့ကအမှန်တကယ်ထူးခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။
ကမ္ဘာကြီးကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ဖြစ်ရပ်များအခါအားလျော်စွာထပ်ခါတလဲလဲနေကြသည်လျှင်, သမိုင်း, ယနေ့မတိုင်မီသာတစ်ချိန်ကဖြစ်ပျက်အများအပြားအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ ရဲ့အရှိဆုံးအမှတ်ရစရာအဖြစ်အပျက်များအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြပါစို့။
ကျောက်ရောဂါကျော် 1. အောင်ပွဲခံ
တစ်နှစ်ပြည်သူ့။ ကျောက်ရောဂါ၏ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ကပ်ရောဂါ2သန်းသေဆုံးစဉ်အတွင်းအဘယ်သူပျက်ကျန်ရစ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် 10 နှစ်ကျော်ဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောရောဂါများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းအလုပ်လုပ်ပါပြီ။ လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်အညီ, ကျောက်ရောဂါ၏နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ် 1978 ခုနှစ်ကမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်, အောက်ပါတစ်နှစ်ကတရားဝင်ရောဂါတိုက်ဖျက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ကျောက်ရောဂါ - တစ်ကြိမ်နဲ့အလုံးစုံတို့အဘို့ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရောဂါ။
အံ့သြစရာကောင်းတာကတန်ဂန်ယိ (ယနေ့တန်ဇန်းနီးယား) တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်စိတ္တဇနာ၏အမှု 1962 ခုနှစ်ကမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သုံးခရစ်ယာန်ကျောင်းသူကျောင်းများထိန်းအကွပ်မရှိရယ်မောဖို့စတင်ခဲ့သည့်အခါပုံမှန်မဟုတ်သောကပ်ရောဂါဇန်နဝါရီလ 30 ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာခဏတစ်များအတွက်ကျောင်းပိတ်ပစ်ရန်ဦးဆောင်သောအခြားကျောင်းသားများ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်အခြားဝန်ထမ်းကတက်ခူးခဲ့သည်။ အဆိုပါစိတ္တဇနာဟာကပ်ရောဂါထက်ပိုမို 1 တထောင်ဖမ်းမိထားပြီးသို့မှသာပြည်သူ့။ အခြားဒေသများသို့ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် 18 လကြာခဲ့သည်။ ဒါဟာအစားပဲရယ်နေတဲ့တုပ်ကွေးကပ်ရောဂါလူများ၏နှစ်စဉ်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ စကားမစပ်, သိပ္ပံပညာရှင်စိတ္တဇနာသင်တန်း၏တင်းကျပ်သောအခြေအနေများအားဖြင့်အစပျိုးနှင့်ရယ်မောခြင်းမှတဆင့်ကလေးများစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာခဲ့ဟုယုံကြည်ကြသည်။
မြောက်အတ္တလန္တိတ်ခုနှစ်တွင်မှန်မှန်မုန်တိုင်းများနှင့်ဟာရီကိန်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ စာရင်းအင်းပျမ်းမျှဤဒေသများ၏မြို့သားနှစ်စဉ် 12 မုန်တိုင်းများနှင့်6ဟာရီကိန်းကြုံတွေ့ကြောင်းပြသပါ။ 1974 ခုနှစ်ကတည်းကမုန်တိုင်းများတောင်အတ္တလန္တိတ်ပေါ်လာဖို့စတင်ပေမယ့်အလွန်ခဲတွေ့ကြုံတတ်၏။ 2004 ခုနှစ်တွင်သိသိသာသာထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ရတဲ့သည့်ဘရာဇီးဟာရီကိန်း Catarina ၏ကမ်းခြေတလျှောက်။ ဒါဟာတောင်အတ္တလန္တိတ်၏ပိုင်နက်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောဟာရီကိန်းကြောင်းယုံကြည်ရသည်။
အဆိုပါတပ်ရင်း၏ 4. ဆုံးရှုံးမှု
များ၏နှင့် unexplained ဖြစ်ရပ်ဆန်းတူရကီအတွက်သြဂုတ်လ 1915 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဗြိတိန်-Norfolk တပ်ရင်းဟာရန်လိုမုန်းတီးမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူ. ရွာအပေါ် Anafarta တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်။ မျက်မြင်သက်သေများအဆိုအရစစ်သားများကအစိတ်အပိုင်းကိုမုန့်တလုံးနဲ့တူခဲ့ပါတယ်ဖြစ်သောထူမြူ, တိမ်ဝိုင်းရံ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်အဘယ်သို့၎င်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်ပင်လေပြင်းတိုက်ခြင်းလေကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်မပေးပါ။ မိုဃ်းတိမ် dissipated ပြီးနောက်တပ်ရင်း 267 ကလူပျောက်ကွယ်သွားပြီ, တဖန်တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးခဲ့သညျ။ တူရကီ၏ရှုံးနိမ့်သုံးနှစ်ကြာတှငျမှတျတမျးတငျထားသခံခဲ့ရသည့်အခါ, ဗြိတိန်ကဒီတပ်ရင်း၏အကျဉ်းသားများပြန်လာတောင်းဆိုထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရှုံးနိမ့ခြမ်းသူတို့အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုဖမ်းမိမဟုတ်, စစ်တိုက်ခြင်းကဤစစ်သားများနှင့်အတူဦးဆောင်လမ်းပြမဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ နက်နဲသောအရာတခုကိုလူအကနျြရစျခဲ့ခဲ့ပါဘူးသူကိုအဘယ်မှာရှိ။
ဂြိုလ်၏ 5. ရှာဖွေရေး
ယူရေးနပ်စနှင့်အနီယမ်ရေခဲဂြိုလ်ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် 1977 ခုနှစ်မှာသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအပေါ်တစ်ဦးအာကာသယာဉ် "Voyager 2" ကိုစလှေတျပါပွီ။ ယူရေနီယံကြောင့် 1986 ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနှင့် Neptune - သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်။ သုတေသနကနေတဆင့်ယူရေးနပ်စများ၏လေထု 85% ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် 15% ဟီလီယမ်ပါဝင်သည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်, မိုဃ်းတိမ်အောက်မှာ 800 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးမှာသမုဒ္ဒရာဆူနေကြသည်။ Neptune များအတွက်သကဲ့သို့, အာကာသယာဉ်သည်၎င်း၏ဂြိုဟ်တုပေါ်တည်ရှိပြီးတက်ကြွရေပူစမ်း fix နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏အမြင်တွင်, လူတွေအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သည့်, ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ဦးစားပေးထဲမှာသိပ္ပံပညာရှင်များ, အဖြစ်ရေခဲကုမ္ပဏီကြီးများ၏တစ်ခုတည်းသောအကြီးစားလေ့လာမှု, - ယခုအချိန်တွင်မှာ။
AIDS ရောဂါအတှကျအ 6. ရောဂါပျောက်ကင်း
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ကဦးသေဆုံးကြောင်းအေအိုင်ဒီအက်စ်တိုက်ဖျက်ဖို့နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်တဲ့မူးယစ်ဆေးကိုဖန်တီးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ပါပြီ။ အမေရိကန်တိမောသေ Ray Brown ကလည်း "ဘာလင်လူနာ" ဟုခေါ် - သမိုင်းကဒီရောဂါကျော်လွှားနိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာလူတဦးဟုလူသိများသည်။ 2007 ခုနှစ်တွင်လူတသွေးကင်ဆာကုသခံခဲ့ရသည်, သူသည်အသွေးသည်ပင်စည်ဆဲလ်များကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ ဆရာဝန်များအလှူရှင်ဟာ HIV ပိုးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှခုခံထောက်ပံ့သောရှားပါးမျိုးဗီဇ mutation ခဲ့ကြောင့် Ray ပေါ်တွင်လွန်ကြောင်းပြောကြသည်။ သုံးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်သူကိုစမ်းသပ်ဖို့ လာ. , ဗိုင်းရပ်စ်မရှိတော့မိမိအသွေး၌ဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်ဦးဘီယာအတူအကြံပေးအဖွဲ့သို့ကျဆင်းသွားခြင်း, က XIX ရာစုအစမှာလန်ဒန်မြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သော mouse ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ္ဍရီကနေယူပါလျှင်ဤအခြေအနေသည်။ အဆိုပါတင့်ကားအတွင်းဖြစ်ပေါ်သည့်မတော်တဆထိခိုက်မှုရှိ၏အောက်တိုဘာလ 1814 ခုနှစ်တွင်ဒေသခံဘီယာသည်အခြားင့်ကားများအတွက်ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်ရာ, ဘီယာနှင့်အတူပေါက်ကွဲ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို 1.5 mln ၏လမ်းမျောလှိုင်းပေါ်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဘီယာလီတာ။ သူမသည်၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုအတွက်အရာအားလုံးကိုကြံ့ကြံ့ခံအဆောက်အဦးကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်အရက်အဆိပ်သင့်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ကွယ်လွန်သွားတဦးတည်းအဘယ်သူကိုကိုးလူမျိုး၏သေခြင်းစေ၏။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဘေးဥပဒ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတုန်း။
8. အောင်မြင်သော aviaprestuplenie
တိုက်ခိုက်သူတွေဟာလေယာဉ်အပိုင်စီးဖို့ကြိုးစားပေမယ့်တစ်ခါသာအမှု၏သမိုငျးတှငျအောငျမွငျခဲ့သညျ့အခါအမှုများစွာရှိပါတယ်။ 1917 ခုနှစ်တွင်ဒန် Cooper ကဘိုးအင်း 727 ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်လေယာဉ် သွား. လေယာဉ်မယ်ကမိမိအအစုစုကိုတစ်ဗုံးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်နှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုခဲ့သည့်အတွက်မှတ်စုတစ်ခု :. လေးလေထီးပေးအပ်နှင့် $ 200 ကိုတထောင် Teorrorist လူတွေကိုမေးမြန်းတော်မူလျှင်, နှင့်လေယာဉ်မှူးအမိန့်ထုတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ထလွတ်မြောက်လာ စကားများပျံသန်း။ ရလဒ်အဖြစ် Cooper ကတောင်တို့အပေါ်မှာပိုက်ဆံထဲကနေခုန်များနှင့်အခြားအဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်မမြင်စဖူး။
9. Carrington Event
တစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့မှာ 1859 ခုနှစ်အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နက္ခတ္တရစ်ချတ် Carrington ထိုနေ့ရက်သည်ပြင်းထန်သော geomagnetic မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်စေသောနေမီးတောက်, စောင့်ကြည့်။ ရလဒ်အနေနဲ့ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကတွင်ကြေးနန်းကွန်ယက်ကိုငြင်းဆန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူကအရမ်းပြောင်လက်တောက်ပသောမြောက်ပိုင်းတိုင်းအလင်းများ, စောင့်ကြည့်နိုင်ဘူး။
အန္တရာယ်အရှိဆုံးရေကန်တစ်ခုမှာကင်မရွန်းအတွက်မီးတောင်၏မီးတောင်အတွက်တည်ရှိသည်, ထိုသို့ဟုခေါ်သည် "ရေကန် Nyos ။ " မြူ၏ပုံစံ 27 ကီလိုမီတာမှပြန့်နှံ့ခဲ့သည့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၏ကြီးမားသောပမာဏ၏တစ်ဦးလွှတ်ပေးရန်ရှိသောကြောင့် 1986 ခုနှစ်တွင်သြဂုတ် 21 ရေလှောင်ကန်, လူတွေအသေခံစေခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ 1.7 တထောင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့နှင့်များစွာသောတိရစ္ဆာန်များ။ ဓာတ်ငွေ့ရေကန်သို့မဟုတ်ရေငုပ်သင်္ဘောမီးတောင်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏အောက်ဆုံးအပေါ်စုဆောင်း: သိပ္ပံပညာရှင်များအကြောင်းရင်းနှစ်ခုအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ပိုးမွှားလျော့ကျစေအပေါ် ထိုအချိန်မှစ. ပုံမှန်အလုပ်, သိပ္ပံပညာရှင်သူတွေဟာထိုကဲ့သို့သောကပ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှိုးဆော်ခြင်း ie ။
ဆန်းကြယ်မှုများကြောင်း Unexplained ဖြစ်ရပ်ဆန်း, Devon 8 ဖေဖော်ဝါရီလ 1855 မှ7၏ညဉ့်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နှင်းကလူထူးဆန်းခြေရာများခွာ left, နှင့်စာတန်ကိုယ်တော်တိုင်ရှိကွောငျးကိုအကြံပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအပုဒ်အတူတူပင်အရွယ်အစားတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ 20-40 စင်တီမီတာအကွာအဝေးမှာတည်ရှိကြောင်းအံ့သြ။ သူတို့ကမြေယာဒါပေမယ့်လည်းခေါင်မိုး, နံရံများပေါ်တွင်နှင့်အပ်ချုပ်သူမှတံခါးဝအနီးမှာမသာရှိကြ၏။ တဦးတည်းအသံပြည်သူ့အဘယ်သူမျှမမြင်ကြပါသို့မဟုတ်ဆူညံသံကိုကြားခဲ့ကြဟုဆိုသည်။ မိုဃ်းပွင့်ကိုလျင်မြန်စွာအရည်ကျိုအဖြစ်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ခြေရာတွေ၏မူလအစစစ်ဆေးဖို့အချိန်မရှိကြပါဘူး။
ရေတံခွန်များ၏တင့်တယ်ရှုပ်ထွေးလေးနက်အကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်နိုင်ကြောင်းတိုက်စားမှုတော်ကိုနှိုးဆော်လေ၏။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်တန့်ရန်, 1969 ခုနှစ်တွင်အမေရိကနှင့်ကနေဒါအစိုးရပထမဦးဆုံးရေထွက်သွားတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ကရာမှတဆင့်အသစ်တစ်ခုကိုအတုရုပ်သံလိုင်းဖန်တီးနိုင်အာဂရာခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါရေတံခွန်ခြောက်သွေ့သောကြောင့်, အလုပျသမားတစ်ဦးရေကာတာဖန်တီးဆင်ခြေလျှောကာကွယ်မှုဖြုန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ကလူကဒီထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်သက်သေခံလိုချင်နေသောကြောင့်ဤအချိန်တွင်အခြောက်လှန်းနိုင်အာဂရာရေတံခွန်နီးပါးအဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်း၏, ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့အသံပေမယ့်မြင်းစီးသူရဲများနှင့်ခြေလျင်ဖမ်းမိစင်းကို 850 သေနတ်များနှင့်အများအပြားကုန်သွယ်သင်္ဘောများနှင့်အတူ 14 သင်္ဘောများပါဝင်သည်အခါအမှု၏သမိုင်း။ ဒါဟာကျောက်ဆူးဒတျချြစင်းကိုရှိရာအမ်စတာဒမ်, အနီးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ 1795 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကြောင့်ပြင်းထန်နှင်းခဲဖို့ပင်လယ်ရေခဲတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်, ထိုသင်္ဘောများပိတ်မိခဲ့သည်။ ပြင်သစ်တပ်တွေ၏သဘောသဘာဝ၏အကူအညီမှတဆင့်သင်္ဘောရသူတို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
သွေးထဲတွင် 14 အပြောင်းအလဲများ
သြစတြေးလျ၏တစ်ဦးကနေထိုင်သူ,9နှစ်အရွယ် Demi-Lee ကဘရန်လူသားတွေအတွက်ရှိရာပြောင်းလဲအသွေးသည်အုပ်စုတစ်စုတည်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်လူနှင့်လအနည်းငယ်ကနေမိန်းကလေးအစားထိုးအသည်းအကြာတွင်ဆရာဝန်များကသူမအနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်နှင့်အပြုသဘောဖြစ်လာဖို့အသုံးပြုရသောရျအိပျချြအချက်, ပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီအသည်းအတွက်ရိုးတွင်းခြင်ဆီပင်စည်ဆဲလ်များကိုမိန်းကလေးငယ်များကိုအစားထိုးပေးသောပင်မဆဲလ်, ခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုမှဖြစ်နိုင်သမျှကျေးဇူးတင်စကားလုပ်ထားပြီးကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကဆိုကြပါတယ်။ အလားတူဖြစ်စဉ်ကိုလျှော့ချကိုယ်ခံစွမ်းအား Demi ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
1966 ခုနှစ်မှာသြဂုတ် 20 Niteroi နှစ်ခု၏ဘရာဇီးလ်မြို့အနီးရှိတောင်ကုန်း screw နှစ်ခုအနီးရှိလူသေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကသံမျက်နှာဖုံးခဲ့ကြသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံ, မိုးကာအင်္ကျီနှင့်မျက်နှာများတွင်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်မည်သည့်သဲလွန်စမြင်လျက်အနီးအနားရှိအရေးယူဘို့ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူရေအောက်မှနေပုလင်းတစ်လက်ကိုင်ပဝါနှင့်မှတ်စုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးခဲ့နိုင်ဘူး။ တစ်ခုကသူသခှေဲစိတျခွငျးတို့သညျအသေခံအဘယ်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါဆွေမျိုးသားချင်းသူတို့ဝိညာဉ်စွဲခဲ့ကြသည်များနှင့်ဂြိုလ်သားကမ္ဘာနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးထူထောင်ချင်ပါတယ်ကပြောကြားခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူသည်ဖြစ်စေမကအခြားကမ္ဘာလျှင်အစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြောင်းပြောသည်အစောပိုင်းကသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ထိုနာလက်အောက်တွင်ဗော်တဲယားတစ်ခုအက်ဆေးရေးသားခဲ့သည်ဘယ်သူကိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အကျဉ်းသား, ဖွက်ထားပေးသည်။ သီအိုရီအကဉျြးသားရှင်ဘုရင်အားအမွှာညီအစ်ကိုရှိကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပြီး, ဒါကြောင့်သူကမျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ကကတ္တီပါဒကိုဖန်ဆင်းသောကြောင့်တကယ်တော့ဒါဟာသံသောသတင်းအချက်အလက်များ, တစ်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။ အခြား version ကိုအကျဉ်းထောင်အတွင်းမျက်နှာဖုံးအောက်မှာတကယ့်ဘုရင်ကပတေရုသငါခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အစားရုရှားဟန်ဆောင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာထားတဲ့အရသိရသည်ရှိပါသည်။
အသက် 30 ဓါတ်ပုံတွေကိုခရမ်းရောင်ထိုက်ထိုက်တန်တန် 2018 ၏အဓိကအရောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း
နမ်းဖို့ခစျြတဲ့သူအသက် 30 တိရိစ္ဆာန်များ!
6 အများအပြားသည်အသုံးပြုသူများမှမသိရသည့်မမျှော်လင့်ဘဲအန္တရာယ်အခြေအနေများ, Instagram ကို
အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် "ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုပါ" ၏အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များ၏ 25
ကြောင်၏ထုံသောအပြုအမူ၏ 29 နမူနာ
စိတ်ကူးရန်ခက်ခဲကြောင်း 10 အရှိဆုံးဖန်တီးမှုအိမ်ပြန်
Rottweiler ခွေးစဉ်းစားရန် 30 ရက်အကြောင်းပြချက်မတ်ေတာအတှကျဖန်တီးကြသည်မဟုတ်
သငျသညျအကောင်းခံစားချက်တစ်ခုထိုးပေးလိမ့်မည်ဟု 20 ခွေး!
သငျသညျ 100% ဖြစ်ကြောင်း 25 ကြောင်
ဆိုဗီယက်ကြိမ် hacking အမျိုးပျက်ဘဝထက် 10 ထက်ပိုသော
Meghan Markle သူမ၏လာအောင်နှိုးဆွတဲ့သူဆယ်အမျိုးသမီးတွေဖော်ပြထား
မီးဖို၌အိုး၌အသားနှင့်အတူ Buckwheat - အရသာရှေးခေတ်ဟင်းလျာများ၏အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
အာလူး fries ပြတိုက်
ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ, နှင့်မည်သို့သွေးတိုးရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရပ်တန့်ရန် - ဖိအား 140 90 ကျော်?
အနှိပ်ကုထုံး - ကုသမှုအားလုံးအမျိုးအစားများနှင့်နည်းလမ်းများ
တစ်ဦး Transformer ဆွဲရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မွေးကင်းစကလေးအတွက်သည် Norma bilirubin
Pies များအတွက်အစာရှောင်သောတဆေးသည်မုန့်စိမ်း - တစ်အရသာ Home-မီးဖုတ်ထားသောများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ငါသည်ငါ၏ခင်ပွန်းမချစ်ကြဘူး - ဘာလုပ်ရမှန်း?
အဘယ်မှာပိုပြီးဖိန်း - လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီသနည်း
ခရမ်းချဉ်သီး "Malachite Box ကို"
မှတ်ပုံတင်ရန် - ထိုသင်္ချိုင်းအတွင်းကျဆုံး